Caafimaaad,Naanka Galmada: Noocyada, Sababaha, Calaamadaha, iyo daaweynta | shumis.net
Home » galmada » Caafimaaad,Naanka Galmada: Noocyada, Sababaha, Calaamadaha, iyo daaweynta
Caafimaaad,Naanka Galmada: Noocyada, Sababaha, Calaamadaha, iyo daaweynta
Cillad Galmada, inkasta oo aad caadi u ah, Waa mawduuc kaas oo inta badan dadka ka fogaadaan ama waa ka xishoodaan inay ka hadlaan. Ka hor inta hadlin dhibaatooyinka galmada, waxaa muhiim ah inaad ogaato oo ku saabsan wareegga jawaab galmada. Waxa uu soconayaa wareegaa jawaab galmada waa taxane ah oo afar ay hay’daha isbeddelada jidheed iyo niyadeed in ka kacsiga qaadan meel la yeelan doono galmo.
Afarta marxaladaha isku xig xiga waa: farax, taagga, biiyo-, iyo xallinta.
Naanka Galmada, Sidaa darteed, waa dhibaato galmada in ay dhacaan inta lagu jiro mid ka mid ah waji ah wareegga jawaab galmada iyo in Liibaan raali galmada looga hortago waxqabad kasta oo galmada la-dhiirrigelin, sida siigaysiga iyo galmada. Naanka Galmada saamayn labadaba ragga iyo dumarka qaangaarka ah, laakiin way ku badan yihiin dumarka badan ee ragga. Xaaladaha intooda badan naanka galmada waa la daaweyn karaa.
Noocyada Galmada naanka ee Dumarka
Waxaa jira afar naanka galmada aasaasiga ah in ka badan yihiin dumarka. Kuwani waa:
Lagu xiro ama hooseeyo rabitaanka galmada: Tani waa libido si fudud u yar ama la’aanta rabitaanka galmada. Waxaa sida caadiga ah sababa sababaha jirka iyo / ama caafimaadka ee naanka galmada.
Galmada kacsiga disorder: Taasi waxay dhacdaa marka qof dumar ah oo uu noqonayaa frigid oo aan awoodin in ay ka jawaabto ama aad ismaandhaafka in kasta oo stimulations galmada.
La’aanta jiro boosaska Champions galmada soo noqnoqda: Tani waa markii qof dumar ah oo joogto ah ku guuldareysto inuu gaaro orgasms, horseeday inay wareerka ficilka galmada.
Galmada Xanuun: Mararka qaarkood sababa qallayl iyo siilka jagooyinka galmada qaar ka mid ah.
Noocyada naanka Galmada ee Ragga
Libido Low ama la’aanta hawadooda galmada.
Naanka Kacsi – kari waayeen in ay gaaraan kacsiga ama ilaaliyaan mid.
Ejaculations dhiciska ah ama awood la’aanta shahwo dhan ficilka galmada.
Sababaha naanka Galmada
Sababaha naanka galmada la isugu keenaa laga yaabaa in laba: sababaha jirka ama caafimaadka, iyo sababaha nafsi. Sababaha caafimaad iyo jir ahaan waa:
Cudurada kelyaha iyo beerka
Dheelitir la’aanta hormoon ah
Sababaha nafsi waa natiijo ka mid ah xasillooni guud ee maanka. Qaar ka mid ah yihiin:
Calaamadaha naanka galmada ee ragga iyo dumarka
Calaamadaha naanka galmada waa shaqo ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ee cudurada ee rag iyo dumarba, sida: rabitaanka galmada yar yahay ama ka maqan, kari waayeen in ay leeyihiin ama ay u ilaaliyaan kacsiga inta lagu jiro hawlaha galmada, kari waayeen in ay la kulmaan daayaba ah, xanuun inta lagu jiro galmada, dhibaatooyin la xiriira shahwada rididada, oo ku adag tahay helitaanka ama sii joogi kacsaday.
Cilad ah naanka Galmada
Waxaa jira laba cudur weyn ee naanka galmada:
Qiimaynta Cilmi Nafsiga
Qiimaynta nafsaaniga ah waxaa loo sameeyaa by therapist ah u tababaran oo ku saleysan natiijooyinka wareysi ku saabsan taariikhda galmada iyo arrimaha galmada ee hadda, halka baaritaanka miskaha waxaa badanaa laga sameeyaa in kiisaska cillad ah ayaa sabab dahsoon caafimaad sida khafiif ah unugyada taranka iyo hoos u barti maqaarka
Title: Caafimaaad,Naanka Galmada: Noocyada, Sababaha, Calaamadaha, iyo daaweynta
Posted by Unknown, Published at July 05, 2016 and have 0 comments